Siidaalee yaadannoo hammeenya sirna Nafxanyaa yaadachiisuuf Oromiyaa keessatti jaaramaniin har’a Oromoo gowwoomsuun hin danda’amtu. - Kichuu
HomeAfaan OromooNewsSiidaalee yaadannoo hammeenya sirna Nafxanyaa yaadachiisuuf Oromiyaa keessatti jaaramaniin har’a Oromoo gowwoomsuun hin danda’amtu.
Siidaalee yaadannoo hammeenya sirna Nafxanyaa yaadachiisuuf Oromiyaa keessatti jaaramaniin har’a Oromoo gowwoomsuun hin danda’amtu.
Siidaalee Calanqoo fi Aanolee kan ijaarsise Mallas Zeenaawii tahuun hin haalamu. Bara ajaja isaa qofaan OPDOn taa’i jennaan teessee ka’i jannaan ol ka’uu malee aangoo homaatuu hin qabne san jaaraman. Wayyaaneen siidaalee san Oromoof dhimmitee hin jaarsifne. Danaa siyaasaa mataa isiif goote. Dhakaa tokkoon shimbira lama dhahuuf ture. Tokko, madaa Oromoo waan beeytuuf ittiin qabattee Oromoo irraa fuula argachuuf yoo tahu, gama kaaniin ammoo diinummaa Oromoo fi Amaara gidduu jiru hundee gad jabeessuun qaawwa jarri walitti dhihaattee irratti maluuf maltu hunda cufachuuf ture. OPDOn yeroo ammaa (Bilxiginnaan) osoo danda’ameefii siidaalee kana buqqiftee balleessuun ekeraa Minilik gammachiifti ture. Finfinnee keessatti siidaa Minilik biratti kan Xaayituus dabaluuf osoo foolattuu itti dammaqmnaan rifattee dhiisuu isii ni yaadanna.
Dubbii kana kan kaafneef, siidaa Calanqoo Calii kan qabsaayonni Oromoo jalatti suuraa ka’an arganii kaadiroonni Bilxiginnaa yoo gururi’an argineeti. ”Siidaan abbaa qaba” jedhan. Abbaan siidaa eenyu jechuu yaadan laati? Abbaa siidaa ummanni ni beeka. Abbaan Siidaa ummatuma abbaa seenaa saniiti. Kaadiroonni Wayyaanee jalatti afaan siileffatanii har’a Nafxanyaadhaaf arraatoman afaanis tahee hamileedhuma waa’ee siidaalee kanaa ittiin dubbatan hin qabani. Siidaan isaan halkanii guyyaa waaqeffatan warra masaraa keessaa sani – Minilikii fi Haila Sillaasee.
~ በግፍ ከሀሮማያ ዩኒቨርሲቲ የተባረሩት 77 የኦሮሞ ተማሪዎች በፍንፍኔ በአንድ ቦታ ተከማችተው ተቀምጠዋል ምንም አይነት ቅያሪ ልብስ ሳይዙ፣እርሀብን ጨምሮ በአካል ተዳክመውና ተጎሳቁለው ይታያሉ ይሄው ነው ባለ ግዜ መሆን
Oduu nama gaddiisisu rajiidham ! Dambi Doolloo Oduu Fokkisaa